Ministry of Labor and Social Affairs – Somali Government – Xilka iyo waajibaadka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada
Xilka iyo waajibaadka Wasaaradda
Dejinta, horumarinta iyo dhaqangelinta siyaasadda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada.
Dib-u-habeynta, casriyeeynta iyo tayeynta xaafiisyada, maamulka iyo shaqaalaha Wasaaradda.
Ilaalinta hantida Wasaaradda iyo soo-celinta midda ka maqan.
Dabagalka heshiisyadii horey loo galay ee Wasaaradda khuseya.
Soo-jeedinta Shuruucda khuseysa hawlaha Wasaaradda.
Diyaarinta iyo soo bandhigidda warbixin-xilliyeed joogta ah oo ku aaddan hawlaha Wasaaradda.
Xaqiijinta kormeerka shaqada (Labor Inspection), caafimaadka shaqaalaha iyo nabadgelyada goobaha shaqada, iyo sare-u-qaadidda xiriirka shaqada iyo shaqaalaha dalka (Labor Relations).
Dersidda iyo diyaarinta xogaha macluumaadka suuqa shaqada.
Xaqiijinta iyo dhaqan-gelinta xeerarka iyo shuruucda dalka ayadoo la waafajinaayo xeerka caalamiga ah.
Kormeerka arrimaha shaqada iyo shaqaalaha hay’adaha gaarka ah.
Samaynta cilmi baarisyo iyo daraasado la xiriira mashaakisha suuqa shaqada (Labour Market) sida shaqa-siinta (Employment) shaqa-la’an (Unemployment), shaqa-liidashada (Underemploment), yaraanta shaqaale xilliyeedka (Seasonal Labour Shortage), shilalka iyo dhaawacyada shaqada(Labour Accidents and Injuries), iwm.
Gacan-siinta ururrada shaqaalaha Soomaaliyeed.
Dersidda, hindisidda iyo soo jeedinta heerka ugu hooseeya maalin-gooska(Minimum Wage) ee shaqaalaha iyo xoogsatada dalka ayadoo la tixgelinaayo duruufaha dhaqaalaha dalka.
Dhex-dhexaadinta iyo xallinta khilaafaadka ka dhasha shaqada(Labour Disputies) oo ka dhexeeya shaqaalaha (Employees) iyo loo shaqeeyayaasha (Employers) si waafaqsan sharciga shaqada dalka (National Labour Code).
Tixgelinta iyo taakulaynta dadka naafada ah ee suuqa shaqada.
Dersidda iyo ogaanshaha xirfadaha macduunka ku ah (Skill Shortage) suuqa shaqada.
Qiimaynta shahaadooyinka xirfadda (Trade Testing and Certification).
Dersidda iyo la socodka xaaladaha iyo duruufaha shaqada ee xoogsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalalka dibedda.
Diyaarinta buugga kala-qeexidda xirfadaha dalka(National Standard Classification of Occupations) iyadoo lala kaashanayo hay’adaha ILO,ALO iwm.
Dejinta siyaasadaha doolka (Migration ) iyo muruqmaalka dalka(National Manpower Policy).
Soo jeedinta abuurista guddiyada soo socdo ahmiyadda ay leeyihiin awgeed.
Guddiga qaranka ee rukhsa-siinta shaqaalaha shisheeyaha
Guddiga qaranka ee siyaasadda shaqo-siinta
Guddiga qaranka ee siyaasadda horumarinta muruqmaalka dalka
Kormeerka hay’adaha ka shaqeeya Arrimaha Bulshada
Soo celinta xaruumaha hore ee Naafada
U tababarid xirfado iyo u abuuris fursado shaqo dadka naafada ah
Uruurinta iyo daryeelidda agoonta darbi jiifta iyo waayeelka aan ehelka lahayn
Soo celinta xaruumahii hore ee daryeelka agoonta
Sameynta shahaadooyinka xirfada lagu baro laguna dhaqan celiyo darbi jiifta
Rukhsa siinta shaqaalaha shisheeye
Dejinta siyaasada shaqo siinta
Sameynta siyaasadda hurumarinta muruq maalka dalka
Bixinta fasaxa Dhoofka Shaqaalaha (Nula Osta)
Diyaarinta siyaasadda howl gabka ee shaqaalaha dowladda
Bixinta warqadda dalabka baasaboorka ee shaqaalaha dowladda
Dejinta siyaasadda shaqo qorista shaqaalaha dowladda
Dib u habeynta sharciga shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah
U abuuris fursado shaqo waxtar leh si simman dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ( gaar ahaan dhallinyarada soomaalyeed )
Sameynta warqadda aqoonsiga shaqaalaha dowladdaa (ID CARD)
Abuurista data base oo lagu ogaanayo maqnaashaha shaqaalaha dowladda
U doodida xuquuqda shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah
POSTED IN » sharciga Ajnabiga, Somali